सम्झनामाः मधेश आन्दोलनका शहिद रामकृष्ण राउत - News Today
सम्झनामाः मधेश आन्दोलनका शहिद रामकृष्ण राउत
श्यामसुन्दर यादव । तेस्रो मधेश आन्दोलनका शहिद हुन् रामकृण राउत । उनी सहादत भएको आज एक वर्ष पुगेको छ । उनको जन्म सप्तरीको पोर्ताहा गाउँ विकास समितिको वडा नम्वर–१ मा माता रुक्मिणी देवी र पिता सुकदेव राउतको पहिलो सन्तानको रुपमा वि.सं. २०११ सालमा भएको थियो । उनी परिवारकै जेठो भएका कारण क्रमशः दिनेश्वर, प्रमेश्वर, बिन्देश्वर, बालेश्वर, धर्मपाल र लालबहादुरको शिक्षादीक्षालगायत पारिवारिक दायित्व समेत किशोरावस्थादेखि सम्हाल्दैआएका थिए । अनुभवकै आधारमा सामान्य अक्षरको ज्ञान भएका रामकृष्ण सानैदेखि मिलनसार एवम् मृदुभाषी स्वभावका थिए ।
पारिवारिक अवस्था एकदमै जर्जर रहेका कारण उनले स्कूल पढ्ने मौका पाएन । बालापन घरायसी कामधन्दामै बिताएका उनी युवास्थामा पुगेपछि विराटनगर स्थित भारतीय सरकारको अधिनमा रहेको कोशी प्रोजेक्टको भू–आर्जन तथा सम्पर्क कार्यालयमा चालकको जागिर पाए । आफूले पढ्न नपाए पनि भाइहरुलाई पढाएर ठूलो मान्छे बनाउने संकल्पकासाथ उनले आफूभन्दा कान्छो ६ भाइहरुको शिक्षादीक्षामा विशेष जोड दिए । ‘ मैले पढ्न पाईन तर तिमीहरुले दुःख गरेर भए पनि पढ्नुपर्छ’ भनेर भाइहरुलाई प्रोत्साहन गर्दैआएका थिए । त्यही भएर उनका सबैभाइहरु हाल विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
जीवनभरि संघर्ष र समाजसेवामा बिताएका रामकृष्ण गाउँमा कसैलाई आपत–विपत परेको बेला भ्याएसम्म सहयोग गर्ने गर्दथे । आदर्शवान व्यक्तित्वको रुपमा परिचित उनले फुर्सद पाएको बेला सामाजिक कार्यहरुमा सहयोग गर्न पछि पर्दैनथे । कोशी प्रोजेक्टको अवकाश प्राप्त कर्मचारी राउतले दाजुभाइसहितको ५० जनाको अभिभाकत्वको जिम्मेवारी सम्हाल्दैआएका थिए । अवकाशपछि घरमा बस्न थालेका उनले छोरा तथा भतिजोहरुलाई समेत पढाईमा विशेष प्रोत्साहन गर्दैआएका थिए । तेस्रो मधेश आन्दोलनको उद्घोष गर्ने क्रान्तिभूमी भारदहमा आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । दैनिकजसो जुलुस प्रदर्शन, राजमार्ग अवरुद्धलगायतका गतिविधिहरु भईरहेको हुन्थ्यो । यसअघि भदौ १ गते प्रहरीको गोलीबाट भारदहका होनहार युवा राजिव राउतको सहादत तथा दर्जनौं घाइते भएकाले आन्दोलनको मुख्य केन्द्र भारदह नै बनिसकेको थियो ।
आन्दोलन चरम उत्कर्षमा थियो । गाउँगाउँबाट सर्वसाधारण जनता आन्दोलनमा सहभागी हुने क्रम बढिसकेको थियो । आन्दोलनकारीहरुले सडकमै धर्ना बसेर राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने गर्दथे भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बलपूर्वक राजमार्ग सुचारु गर्न लाठी चार्ज, अश्रृँ ग्यास तथा दर्जनौं राउण्ड गोली फायर गर्दैआएका थिए । अवस्था तनावग्रस्त थियो । राजनीतिप्रति खासै चासो नराखे पनि उनी मधेशको मागलाई राज्यपक्षले बेवास्ता गर्दैैआएकोप्रति उनी चिन्तित रहनके गर्दथे ।
रणभूमीमा परिणत भएको भारदहमा जिल्लावासीको मात्र नभई सिङ्गो देशको नजर समेत भारदहमाथि नै थियो । २०७२ सालको भदौ २३ गते समेत भारदह बजार तनावग्रस्त थियो । विहानको ११ बजिरहेको थियो । उनी गाई दुहेर ग्यास ल्याउन भारदह चौक निस्केका थिए । आन्दोलनकारी र प्रहरी बीच झडप चलिरहेको थियो । त्यसैक्रममा प्रहरीले ताकेर चलाएको गोली राउतको छातीमा लाग्यो । छातीमा गोली छेडेर निस्केका कारण उनी तत्कालै ढले । सबैका प्रिय रामकृष्णको तत्कालै मृत्यु भयो ।
यता पत्रकारिता पेसामा रहेका उनका भाइ धर्मपाल सदरमुकाम राजविराजबाट समाचार संकलनकालागि भारदहतर्फ प्रस्थान गर्ने तयारीमा थिए । त्यसैक्रममा फोनमा आफूले दाइलाई गोली लागेको जानकारी पाएको उनले बताए । यो सुनेपछि आफू आकाशबाट खसे झैं भएको तथा त्यहाँ पुग्ने क्रममा आन्दोलनकारीले आक्रोशमा मोटरसाइकल तोडफोड तथा हेलमेट फुटाएको सम्झिदै उनले भने ‘घटनास्थल पुग्दा दाजुको जीउभरी रगत लतपतिएको थियो, भाउजुलगायत परिवारका सदस्यहरु बिलौना गरिरहेको दृष्य अझैं पनि सुइरो बनेर घोप्ने गर्छ ।
दाजु गुमाएपछि सारा परिवार अभिभाकविहिन भएको शहिद रामकृष्णका भाइले दुःखेसो सुनाए । ‘दाजु हुँदा हामीहरुलाई घरपरिवारको खासै चिन्ता थिएन, पढाइ–लेखाइ, विवाह, मुण्डनलगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दाइले नै सम्हाल्दैआउनुभएको थियो’ उनले थपे ‘घरको जर्जर आर्थिक अवस्था र अल्पायुमै आमाबुवाको गुमाउनुपरेको पीडाको अनुभूति हामीलाई कहिले हुन दिनुभएन ।’
रामकृष्णको विवाह १५–१६ वर्षको उमेरमा सप्तरीकै जगतपुरकी सुदामा देवी राउतसँग भएको थियो । सहिद रामकृष्णका चार छोरा–छोरीहरु क्रमशः राजकुमार राउत, श्याम राउत, लक्ष्मी राउत तथा पार्वती राउत रहेका छन् । चारवटा पढेलेखेका छोराछोरी छन् । उनका जेठो छोरो ई. राजकुमार नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत छन् भने कान्छो जिल्ला शिक्षा कार्यालय सोलुमा कार्यरत छन् ।
Previous : चोरीको भएका मोबाइल खोज्ने मिसनमा इटहरी प्रहरी
Next : राजविराजमा एमाले नेता पोखरेको पुतला दहन